AMISOM oo beenisay in mid ka mid ah gadiidkooda qof dumar ah ku dilay duleedka Muqdisho.
Howlgalka midowga Africa AMISOM ayaa iska dafiray warar ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta, kaasoo ahaa in mid ka mid ah gaadiidkooda uu qof haweeney ah ku dilay duleedka Muqdisho.
War qoraal ah ka soo baxay Taliska AMISOM ayaa lagu sheegay in 9-kii bishan July kolonyo ciidan oo ay lahaayeen qarax miino lagula eegtay agagaarka deegaanka Arbacow oo qiyaastii 20KM waqooyi galbeed ka xiga magaalada Muqdisho.
Haweeneyda dhaawaca soo gaaray ayaa la sheegay in ay laheyd Uur, iyadoo deg deg loogu qaaday isbitaalka AMISOM ee heerka labaad, halkaasoo lagu daaweeyay, iyadoo markii dambe loo gudbiyay mid ka mid ah Isbitaalada ku yaalla bartamaha magaalada Muqdisho.
Hasse ahaatee waxaa ay wax laga xumaado ku tilmaamtay in haweeneyda oo ku dhaawacantay firirka qaraxa lala beegsaday gaadiidkooda laga been abuuray oo la yiraahdo AMISOM ayaa dishay, taasoo ay ku tilmaameen mid sumcada looga dilayo.